Eyi Spunbond Non-kpara Fabric Manufacturers & Suppliers | Rayson
Ngwakọta dị oke mma kachasị mmaEyi kpaa-nkekọ na-abụghị kpara akwa nke ụlọ ọrụ Rayson nyere na nha na nha dị iche iche. Anyị pịrị apịrị a niche dị ka otu n'ime ndị kasị ama eyi uda-nkekọ na-abụghị kpara akwa emepụta na China. Anyị na-eji ezigbo mma akụrụngwa na ndị ọhụrụ na usoro Nlụpụta eyi na-abụghị kpara akwa. Nke a na-enweghị akwa akwa nke PP bụ ngwakọta zuru oke nke enweghị ike ịgbagha, ịdị nro, na ezigbo ike.
Polypropylene sponbond na-enweghị akwa maka mmiri mmiri
PP spunben bụ akwa polypropylene na-adịghị mma, bụ ezigbo ike na oyi. Ọ bụ ihe dị mma maka oge opupu ihe ubi. Ibu akwa ahụ bụ site na 60gr ruo 80gr na obosara ahaziri. Rayson na-abụghị akwa akwa na-enye gị kacha mma PP spunbond na-anaghị akwụ ụgwọ, na-anabata ịkpọtụrụ anyị.
Na-egbochi akwa akwa
Na-egbochi akwa a na-ejighị eme ihe. Ọ bụ PC abụọ na-anaghị emekọ ihe na owu.
PP kacha mma PP kwara akwa akwa maka ọnụahịa ụlọ ọrụ
PP kacha mma pp spunbend na-enweghị mmasị na ọnụahịa matraasi nke -.Anyị bụ ndị nrụpụta nke PP Spunbond na-enweghị atụ na ahụmịhe afọ 14. ISO, BV& SGS Asambodo. Anyị na-enyekwa pp spunbond maka ị na-anaghị akwụ ụgwọ ozugbo.Ngwaahịa anyị na-agbaso polypropylene dị ka akụrụngwa, site na agbazere okpomọkụ dị elu, silk na-agbagharị, n'ikpeazụ, n'ikpeazụ windic na mpịakọta akpaka.A na-ekwe nkwa ngwaahịa anyị na-ekwe nkwa na nnyefe ahụ bụ n'oge. Isi Ngwaahịa: Nchọpụta ya na-anaghị akwụ ụgwọ maka nchekwa nchekwa / Ọrụ Ugbo na Ugbo na-anaghị akwụ ụgwọ / ọgwụ na-anaghị adị / tebụl na-abụghị .... na ndị ọzọ.
Akwa polypropylene dị elu
Polypropylene na-abụghị geven A na-eji akwa dị iche iche nke polypropy. A na-eji akwa Geywoven polypropylene na ahịa dị iche iche na gburugburu ebe obibi na ndị ọrụ gburugburu ebe obibi, dị ka usoro iwu ụlọ, nkewa na ebe a na-edebe ihe owuwu na nchebe mmiri.
Foshan Rayson na-abụghị nke a na-ejighị n'aka. A na-eme ka ọ bụrụ ihe eji eme ihe na-abụghị nke a na-abụghị nke a na-eme, na-emepụta ihe dị elu na-emepụta ihe dị elu, nke nwere ike ịmepụta akwa pp, sms, agịga agịga na akwa , Na -emepụta oke ibu site na 10GM ruo 150GS n'ime obosara 4,2M, site na nkwalite nkwadebe kwa afọ na-agụ ihe karịrị 36,000. Companylọ ọrụ ahụ nwere ike ịmepụta akwa na-enweghị mmasị nke ọtụtụ agba dị iche iche na nha, kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ndị dị iche iche.
Pp Spunbend na-enweghị ike
Na-enweghị mmasị na Geotexetile Na-eji ihe owuwu na ụlọ ọrụ dị ala na oge niile ma na-eme akara site na idozi ala, imeziwanye saịtị na nzacha, na-ekewakọta ọnụ ma na-agbasa ibu. A na-eji akwa Getyplex a na-ejighị nke polypropylene na-enweghị ike, na-ejikọ ya na agba ojii na agba ntụ agba. Akwa ahụ bụ biodegandable, eco-enyi na UV siri ike.
Isi Ngwaahịa Rayson na-abụghị ụlọ ọrụ
Foshan Rayson na-anọ ihe na-eján. Na-e-mer na-arụ ọrụ na-abịanụ, mwepụ nke na-abịanụ, na- Akwa, na-egosipụta Obu Site na 10gm Roo 150gs Mobisaara 4,2m, saịtị na Ngwongwo nke 36,000.
Akwukwo a na-ejighi akwa
Rayson bụ ụlọ ọrụ ọkachamara nke na-eme PP na-enweghị atụ maka ihe karịrị 14years.Akwa a na-egbutu akwa bụ otu n'ime ngwaahịa anyị nke a na - ejikarị arịa ụlọ, dị ka masịsi na sofa. Ahịrị a na-egbu egbu na-eme ka akwa mmiri dị mfe. Ọ nwere ike melite arụmọrụ nke mmepụta nke roun. A na-ebuga akwa a na-ejighị emekọ ihe maka arịa ụlọ na ahịa Europe.
Ịkwa akwa akwa
Ịkwa akwa akwaA na-eji akwa akwa na-adịghị mma na-eji akwa akwa na-eme matraasi na-eme ka ọ dị mma.Nha bụ 2.1m ruo 2.4m.60gram ka 100grambeige, isi awọ, ojii na ọcha.
Stitch Atted Pp Spunberond akwa akwa maka matraasi
A na-eme akwa nke jikọtara ọnụ, otu ụdị pp spub na-enweghị eriri, ma ọ bụ jide ebe nrụọrụ weebụ ahụ, ma ọ bụ jide ebe nrụọrụ weebụ. A na-eji ihe eji eme ihe na-enweghị eriri na-enweghị mmachi ma ọ bụ ihe ejikọtara ma ọ bụ dị ka ntọala na imepụta Quilts, blanket na Jaketị. Stitch Atted Pp na-ejikọghị akwa bụ ihe bụ isi maka ime matraasi. A na-eji ya dị ka akwa na ala nke matraasi. Akwa na-abụghị nke a na-adọka bụ na 70gr ruo 100g na agba dị iche iche. Rayson bụ ihe kachasị mma PP BRUB-Bonker na-abụghị nke a na-eji. Na-anabata gị ajụjụ.
Akwa a na-ejighị eme ihe na-enweghị atụ maka mkpuchi igbe
Anyị echekwala nsogbu ahụ mgbe anyị na-emepụta akpa mmiri enwere nnukwu mkpọtụ. Ihe eji eme ihe na-acha odo odo na-abụghị ihe na-abụghị ebe mkpọtụ ahụ nwere ike ị nweta matraasi, sofa na arịa ndị ọzọ. Ọ dị nro ma na-eku ume. Na shenght na larịị na-eme ka ọkwa dị mma.
Akwa na-eguzogide mmiri na-enweghị atụ
Akwa na-eguzogide mmiri.Ọ na-eji mpempe akwụkwọ na-ehi ụra nke ọma, maka ihe atụ nke ịwa ahụ, nke a na-eme ka a na-arụ ọrụ.Anyị nwere ọtụtụ nha maka ndị ahịa họrọ .Nacha na gram.Na-ejikọ na akpa ma ọ bụ katọn.